"Metallon is pleased to announce the sale of Arcturus Mine to TN Securities, a Zimbabwean investment company. "Metallon has four operating mines .
Arcturus Gold Mine Zimbabwe. We are a large-scale manufacturer specializing in producing various mining machines including different types of sand and gravel equipment, milling equipment, mineral processing equipment and building materials equipment. And they are mainly used to crush coarse minerals like gold and copper ore, metals like steel...
2018-09-07· Last year, Metallon Corporation — owned by South African-based businessman Mzi Khumalo — disposed Arcturus Mine, which was reeling under financial losses, to prominent lawyer Tawanda Nyambirai's investment vehicle TN Securities for an estimated US$10 million.
Geographic features& Photographs around Arcturus Mine in Zimbabwe (general), Zimbabwe mine(s)a site where mineral ores are extracted from the ground by excavating surface pits and subterranean passages. Slate(0km) Arcturus Mine(0km)
2017-12-04· Arcturus is a robust asset with a significant gold resource and Metallon received offers from a number of potential investors, both from within Zimbabwe and abroad, Mekani .
Arcturas Map - Zimbabwe - Mapcarta
Arcturas Arcturus is a village in the province of Mashonaland East, Zimbabwe.It is located about 32 km east of Harare.According to the 1982 Population Census, the village had a population of 3,300 and the surrounding rural area has a population of approximately 20,000.